China Yenza amabala siko Lweentwngiso kunye Product | siluhlaza
Yenza patch siko
Chenille patch ngokuqhelekileyo kuveliswa ukuba bahombise ezi iibhatyi Varsity okanye enikezela iqela lezemidlalo. ukuba abazenzayo chenille vulu esekelwe elinye okanye amabini, kunokudala imvelaphi ngayo. Ukudibana chenille nezimfakamfele kudla isicelo namabala emidlalo. Siluhlaza Badges lizibophelele umgangatho iimveliso Chenille Iileta kunye imifuziselo, leyo ngokobuqu wena kuxhomekeke isiphathi kunye noyilo. amabala zethu chenille ngeglasi nge-80% uboya, 20% nenayiloni for uqinile added ....
Chenille patch ngokuqhelekileyo kuveliswa ukuba bahombise ezi iibhatyi Varsity okanye enikezela iqela lezemidlalo. Ukuba abazenzayo chenille vulu esekelwe elinye okanye amabini, kunokudala imvelaphi ngayo. Ukudibana chenille nezimfakamfele kudla isicelo namabala emidlalo. Siluhlaza Badges lizibophelele umgangatho lemveliso Chenille Letter s kunye imifuziselo, leyo ngokobuqu wena kuxhomekeke solinganiso kunye noyilo. Amabala zethu chenille ngeglasi nge-80% uboya, 20% nenayiloni ukuba ihlala longeziwe. Ngenxa ukukhethwa kwayo vulu esikhethekileyo, amabala luphawulwa imbonakalo ngokugqibeleleyo ecacileyo 3D.
idijithali obekelwe ifumaneka ngokusivumela zokulinganisa okanye isiko-dala iileta Varsity isicelo sakho nganye. Enoba incwadi yakho yesikolo, iqumrhu sakho enkulu okanye nje kuwe, sinako ukwenza oko.
Previous: Ileta Sew on namabala
Next: Yenza gqwa for iibhatyi
Ileta ye-Chenille ifake isicelo
Chenille Letter ezipetshiweyo
Chenille iiLeta ezipetshiweyo
Chenille uPatch Iileta
Chenille Varsity Letter T uPatch
Iron On Chenille Letter ezipetshiweyo
Iileta Chenille ezipetshiweyo
Ileta Sew on namabala
patch jacket ngumsebenzisi
Chenille patch mascot
Chenille patch ngumsebenzisi
zincwadi Custom chenille
Chenille uPatch Iileta , Chenille Letter ezipetshiweyo, Chenille Varsity Letter , ezimfakamfele ibheji, Hook Ke Loop olukiweyo Badge , Chenille Varsity Letter T uPatch , Zonke iiMveliso- 粤备18108880号ICP -1